June 2, 2021 - Khitalin Media
သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်ခိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်
June 2, 2021 by Khitalin Media
မနေ့ည ၈နာရီကျော်ကျော်လောက်က ကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ သောက်နေကျ ဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်တယ် ထိုင်ခုံက မရှိတော့ ကိုရင်လေး ထိုငိနေတဲ့ စားပွဲမှာပဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် စားပွဲထိုးကောင်မလေးက ကျနော့်အတွက် လက်ဖက်ရည်ခွက် ချပေးနေတုန်း ကိုရင်လေးက မေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင် မှာထားတာ ကြာပီလေ မရသေးဘူးးလား တဲ့….. ကျနော်လည်းးမနေနိုင် မထိုင်နိုင် မေးလိုက်မိတယ် ကိုရင်က ဘာမှာထားတာလဲ လို့….. ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြား မှာထားတာ… အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်….. ကိုရင်က ဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေ ဆိုတော့…. မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. အခုထိ မရသေးဘူးး အမေကမျှော်နေတော့မှာပဲ…. သူက ပြန်ဖြေတော့… ကျနော်သောက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးရယ် ကိုရင် ဟာရယ် ပေါင်းရှင်းလိုက်တယ်….. ပြီးတော့ တပည့်တော် ကိုရင့်အမေဆီကို လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် ….. တပည့်တော်မှာ ဆိုင်ကယ်ပါ … Read more
အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ.. အသက် ၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်ပါပဲ ဒီလိုအချိန်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှားအယွင်းမဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ် ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာတချို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) လက်မထပ်ပါနဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်က အရမ်းငယ်လွန်းပါတယ်။ ဘဝတက်လမ်းအတွက်လည်း ကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရူးမိုက်ပြီးလက်ထပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအရွယ်က မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်မို့ လက်မထပ်သင့်ပါဘူး။ ( ၂ )ပုံအောပြီးမချစ်ပါနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပုံအောချစ်ထားပြီးမှ ကွဲသွားခဲ့ရင် ကိုယ်ပဲအလူးအလဲခံစားရမှာပါ ဒီအရွယ်မှာ မတည်မြဲနိုင်သေးတဲ့အတွက် တစ်ခုခုဆို အရမ်း Serious မဖြစ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက် ရှေ့ဆက်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ တွေ့ရမယ့်လူတွေက အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း … Read more
ခဏခဏ မေ့တတ်နေရင် ဒီနည်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ
ခဏခဏ မေ့တတ်နေရင် ဒီနည်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ ငယ်ငယ်ကလောက် ဉာဏ်မကောင်းတော့ဘဲ မေ့တတ်လာတယ်ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့။ ဦးနှောက်ကလည်း ဓားလိုပဲ သွေးလေ ထွက်လေဆိုတာကို အကုန်သိပြီးကြမှာပါ။ ဒီတော့ မှတ်ဉာဏ်တွေ ကောင်းဖို့အတွက် ဦးနှောက်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ လုပ်ပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းအချို့ကတော့ (၁) တရားထိုင်ပါ တရားထိုင်တာက စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံတွေကို အနားပေးခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကြောင့် စိတ်ကို ပိုတည်ငြိမ်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုအားတွေ ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို မြင့်စေတာမို့ ပုံမှန်လေး ထိုင်ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ (၂) စာအုပ်မှာ ရေးမှတ်ပါ နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတယ်ဆိုတာ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်မလား။ အဲ့သည့်နည်းကလည်း တကယ်အသုံးဝင်တယ်နော်။ လွယ်လွယ်မှတ်လိုက် မေ့လိုက် ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကို လျော့သွားစေချင်ရင် မှတ်ချင်တဲ့အရာတွေကို ခေါင်းထဲမှာ … Read more
“ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီ” ဆိုတာရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အသက်ရွယ်ကွာလွန်းရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ အချစ်မှာ အသက်အရွယ်ဆိုတာမရှိဘူး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချစ်ရင်ပြီးတာပဲလို့ ဆိုကြတယ် တကယ်တမ်း ချစ်လို့ တွဲပြီဆိုတော့မှ ပြဿနာကစတာ ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသက်ခြင်း တအားကွာနေပြီဆို ဘဝဖြတ်သန်းတာခြင်းလည်း မတူတော့ပါဘူး ။ အမြင်နဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းကွာကြတယ် ။ ဒီဒုက္ခတွေကတော့ အသက်ကွာလွန်းသူကို ချစ်မိသူတိုင်း ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ – လွှမ်းမိုးခြင်း အသက်ကြီးတဲ့သူကလည်း သူကအကြီးမို့ သူပြောတာနားထောင်စေချင်တယ် ။ အနိုင်လိုချင်တယ် ။ ငယ်တဲ့သူကလည်း အငယ်မို့ ဆိုးနွဲ့ပြီးအနိုင်ရချင်တယ် ။ အလျှော့ပေးစေချင်တယ် ။ – အကြိုက်မတူခြင်း ဒါကလည်းသိပ်မဆန်းတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ ။ အသက်ကြီးတဲ့ လူကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တယ် ။ ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာထိုင်ပြီးစကားပြောချင်တယ် … Read more
ပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးလေးတည်ဆောက်ဖို့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ လုပ်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေ..
ပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးလေးတည်ဆောက်ဖို့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ လုပ်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ် ဒါဟာ အချစ်ပါ။ဒါပေမယ့် အချစ်ရေးတိုင်းက ပျော်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်မနေပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်မခန့််မသင့်မှုတွေကြောင့် စကားများရန်ဖြစ်မယ်၊တစ်ခါတစ်လေ သဝန်တိုစိတ်မလိုမကျမှုတွေကြောင့် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ကြမယ်၊အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေတွေဆိုရင်တော့ လမ်းခွဲပြတ်စဲတဲ့အထိ ဖြစ်လာကြမယ်။ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်ရေးလေးကို ဘယ်သူကမှ ပြိုပျက်သွားတာမျိုးတော့ မလိုချင်ကြဘူး ဟုတ်။ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ရေးလေးကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အချစ်ရေးလေးဖြစ်လာအောင်လွယ်လွယ်နဲ့ မပြိုကွဲကောင် ချစ်ရသူနဲ့ ဒီအချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိအောင် လုပ်ပါ ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ထားပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူအကြောင်းကို အနည်းအကျဉ်းလောက်တော့ သိထားလောက်ပါပြီ ဒါပေမယ့် အတွင်းကျကျတော့ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိဖို့ စကားတွေအများကြီး ပြောကြည့်ပါ။သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိတယ် သူဘာတွေကို ကြိုက်တတ်တယ်၊ … Read more
ဒီခေတ်လူငယ်တွေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ “ ဈေး အစ” “ ဇာတ် အလယ် ” “ ဖာ အဆုံးဟူသော စကားပုံအဓိပ္ပါယ်..
ဒီခေတ်လူငယ်တွေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ “ ဈေး အစ” “ ဇာတ် အလယ် ” “ ဖာ အဆုံး ဒီစကားလေးက မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရင်ကို တခုခု ဖြစ်ပေါ် စေလိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။ ဖာ ဆိုသော စကားက အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခွထွက်နေသော စကားဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ ရင်ထဲတွင် ဖာဆိုသော စကားကြားသည်နှင့် ယုတ်ညံ့သော စကားဟု ထင်ကောင်း ထင်ပါလိမ့်မည်။ ထို အတွေးနှင့် အတူ စကားတစ်ခု ကိုလည်း ရိုင်းပြသည်ဟု ထင်ပါလိမ့်မည်။ ” ဈေးအစ ဇာတ်အလယ် ဖာအဆုံး ” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီး သူမတို့၏ အချိန်ကာလ နှင့် နေရာ ဒေသ ရွေးတတ်ရန်မှာ ကြားခဲ့သော စကားစုသည်။ ယခု … Read more
တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ဖြတ်ကျော်ရမယ့် အဆင့်( ၅ )ဆင့်
တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ဖြတ်ကျော်ရမယ့် အဆင့်( ၅ )ဆင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်ဟာ ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေမှာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်ကထိခိုက်လွယ်တတ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကို မြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် ….. အဆင့် ၁းလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ် သင့်ရဲ့နံရိုးလေးကို ရရှိလိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာ အားလုံးဟာ ပျားရည်လိုချိုမြနေတယ်။ ချစ်သူလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လိပ်ပြာလေးတွေဝဲနေပြီး အနမ်းလေးတွေ၊ အထိအတွေ့လေးတွေအကုန်လုံးဟာ အရူးအမူးဖြစ်စေတယ်။ မိနစ်တိုင်းသူ့ဆီကမက်ဆေ့လေးတွေမျှော်နေမိတယ်။ နဲနဲရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ပေမဲ့ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမှာလဲ.. အချစ်မှာလူတိုင်းရူးကြတာပဲ။ အဲ့လိုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အချစ်တစ်ခုရှိနေတာ သေချာပါတယ် …။ အခုခံစားနေရတာလေးကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ကျရင် ဒီအမှတ်တရလေးတွေနဲ့ အချစ်ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းအောင်လုပ်နိုင်အောင်လို့ပါ …။ အဆင့် ၂းအခြေကျသွားပြီ တကယ့်ကို အတည်ဆိုတာသေချာသွားပြီဆိုရင် အဆင့် ၂ရောက်သွားပါပြီ။ လက်တွဲဖော်တွေဖြစ်သွားပြီလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ … Read more
အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်ရင် ရေကို ဆေးဝါးကဲ့သို့ မှီဝဲလိုက်ပါ
အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်ရင် ရေကို ဆေးဝါးကဲ့သို့ မှီဝဲလိုက်ပါ (၁) မနက်အိပ်ယာမှ ထတာနဲ့ ရေ (၄) ခွက် (160ml) သောက်ပါ။ သွားကို ရေမသောက်ခင် တိုက်လို့ရတယ်။ သို့သော် အစာစားလို့တော့ မရဘူး။ (၂) ရေသောက်ပြီး ၄၅ မိနစ်အတွင်း ဘာအစာမှမစားပါနဲ့။ (၃) ၄၅ မိနစ်ကြာပြီးရင် အစာစားလို့ရပါပြီ။ (၄) ထမင်းစားပြီးနောက် ၂ နာရီအတွင်း ဘာမှထပ်မစားပါနဲ့။ (၅) ရေကို (၄) ခွက်ကုန်အောင် မသောက်နိုင်ခဲ့လျှင် တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီး များများသောက်ပေးပါ။ လိုအပ်သည့်ပမာဏဖြစ်တဲ့ (၄) ခွက်ထိ မရော က်မချင်း တိုးတိုးပေးပါ။ ကုသပေးနိုင်သော ရောဂါများ သွေးတိုးရောဂါ = ၃၀ ရက် ကင်ဆာရောဂါ = ၁၈၀ ရက် … Read more
Q သောသူ နှင့် ချစ်သောသူကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်
Q သောသူ – ညသန်းခေါင် မင်းဆီဖုန်းဆက်ပြီး ညဉ့်နက်သည်အထိ ဖုန်းပြောတတ်တယ်။ ချစ်သောသူ – သင့်ကို ညသိပ်မနက်ဖို့ပြောလိမ့်မယ်။ Q သောသူ – သူကမင်းကို လုပ်စရာရှိတာမလုပ် ခိုင်းဘဲ သွားလည်ဖို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ချစ်သောသူ – သူကမင်းကို အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ် ဖို့လောဆော်နေလိမ့်မယ်။ Q သောသူ – မင်းနေမကောင်းချိန်မှာ၊ နားဝင်ချိုတဲ့စကားတွေပြောပြီး မင်းကိုဂရုစိုက်ပြလိမ့်မယ်။ ချစ်သောသူ – မင်းနေမကောင်းချိန်မှာ၊ သူ့ဂရုစိုက်မှုတွေက စိတ်ရှုပ်လောက်အောင်ကို ရှိပြီး ဆရာဝန် အတင်းသွားကြည့်ခိုင်းတတ်တယ်။ Q သောသူ – သူကမင်းကို စကားအကောင်းတွေပြောပြီး မင်းရဲ.နှစ်သက်မှုကိုရယူဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိတယ်၊ မင်းကလဲဒါကိုဘဲ မွေ့လျော်နေတတ်တယ်။ ချစ်သောသူ – သူပြောသမျှစကားတွေက မင်းကိုဂရုစိုက်တဲ့စကားတွေဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် မင်းကို အမိန့်ပေးတာမျိုးနဲ့ပြောလေ့ရှိတယ်။ Q သောသူ … Read more